बेहुला आए, दाइजोमा १ रुपैयाँ मागे र बेहुलीलाई हेलिकप्टरमा उडाएर बिदा ? – Sandesh Press
June 12, 2021 409
१०९ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदासम्म पनि हाम्रो समाज दाइजो प्रथाबाट पीडित छ । दाइजोकै कारण हाम्री छोरीबहीनीहरुले प्रताडित हुनुपरेका घटना सुन्दा मन कुँडिएर आउँछ । दाइजोकै कारण जिउँदै जल्नुपरेका जस्ता नमिठा घटनाहरु समाजमा व्याप्त छन् । यसरी दाइजोको लागि लाजमर्दो शर्त
राख्नेहरुले यस खबरबाट केही सिकुन् ।भारतको हरियाणा राज्यको सोनिपत जिल्लामा पर्ने हसनगढ गाउँमा केही पहिले रमाइलो वातावरणमा एक विवाह सम्पन्न भयो । बेहुलाले दाइजोको रुपमा कुनै कार अथवा पैसा मागेनन् मात्र एक रुपैयाँ मागे, त्यो पनि सगुनको रुपमा ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
त्यसपछि बेहुलीको बिदाइ डोली अथवा कारमा नभएर हेलिकप्टरमा भयो ।बेहुलीको नाम सन्तोष हो र उनका बुवा सतबीर एक मजदुर हुन् । गएको फेब्रुअरी १० मा सन्तोषको बिहे हाँसीको रामपुर गाउँका सञ्जयसँग भएको थियो । सञ्जयको परिवारले बिहेमा कुनै दाइजो नलिने भनेर पहिले नै शर्त राखेका थिए । विवाहपछि उनले आफ्नी दुलहीलाई हेलिकप्टरमा चढाएर बिदा भए ।यस्तै अर्को विवाह पनि यसैगरी सम्पन्न भयो, हरियाणको आहुलाना गाउँमा ।
यहाँ एउटै परिवारका दुई छोरीको विवाह भयो । दैनिक भास्करले बताए अनुसार पेसाले सुरक्षा गार्ड रहेका आहुलानाका पवन शर्माले आफ्नी दुई छोरी निशा र काजलको बिहे गरिदिए ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
Prevमोडेल निशा घिमिरेलाई भारतीय चलचित्र जगतले पनि सहयोग गर्नु पर्छ भन्दै पत्रकार पौडेल यसरी उठाए आवाज (भिडियो सहित)
Nextगर्भको ७ महिने छोरासँगै संसारबाट बिदा भइन् श्रीमती: २४ घण्टा नबित्दै श्रीमान पनि अस्ताए !
यी ३ अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवतीले पाउँछन् धनी पति, कतै तपाई त पर्नुभएन ?
तपाईको सानो सहयोगले म बाँच्न सक्छु, सहयोगका लागि सबैसँग नमन सहित हात फैलाए